बेहोशीमा बलात्कार गरेँ भनेर अपराधीले छुट पाउँछ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
के जन्म दिने आमालाई बेहोसीमा छिमेकि को श्रीमति भनिदिन पाइन्छ र ? किन बाबुराम भटृराइले भारतको बिरोध गर्नेले पार्टी छोडे हुन्छ भनेका रहेछन् ? वास्तममा हिसिलाले नयाँ शक्तिको वास्तविक एजेण्डा ओकलेकि हुन भनेर पनि सामाजिक संञ्जालहरु भरिएका छन् ।
नेवारी भाषाको बोलाइमा तपाई बोल्दा ‘टपाई’ निस्किन्छ । म त्यो त्यो मान्छु । विधयेक खारेज गर भन्ने नारामा देश खारेज गर निस्कनुलाई अस्वाभाभिक मान्न सकिंदैन । माफी माग्ने हिसिला यमी पहिलो नेता भने होइनन । यसअघि ठुलो दलका ठुलो झन्डै आधा दर्जन नेताहरुले टङ्ग स्लिप गरिसकेका छन् । मनोविज्ञानका अनुसार मानिसले सामाजिक बन्धन तथा अन्य बाधाहरूका कारणले भन्न नसकेका र गर्न नसकेका कुराहरू अवचेतन मनमा जम्मा रहेको हुन्छ र यस्तो कुरा वा चाहना, सपना, मूर्छा वा बेहोसिमा अभिब्यक्त हुन्छ। अब भन्नुहोस, हिसिला यमी र नयाँ शक्ति पार्टीको आन्तरिक कुरा के हो ? हो मुर्छत अवस्थामा भनिन म मान्छु तर त्यो अवस्था किन र कसरी जाग्यो ? उनले भित्रि मनमा दबायर राख्दाराख्दानै ओकेल्न पुगेकि हुन भन्दा कुनै फरक नपर्ला ।
यमीले आन्दोलनको बेला आवेग र अर्धवेहोसीमा नारा लगाउँदा अभिव्यक्ति दिएको भनेपनि मान्छेको भित्रि मनमा जे छ त्यही कुरा आउने गरेको मनोचिकित्सकहरुले बताएका छन् । मनमा दबेर बसेको कुरा अर्धवेहोसी अवस्था आउने गर्छ । दिल्ली दरवारले देखेको सपना हुनसक्छ ।
के जन्म दिने आमालाई बेहोसीमा छिमेकि को श्रीमति भनिदिन पाइन्छ र ? किन बाबुराम भटृराइले भारतको बिरोध गर्नेले पार्टी छोडे हुन्छ भनेका रहेछन् ? वास्तममा हिसिलाले नयाँ शक्तिको वास्तविक एजेण्डा ओकलेकि हुन भनेर पनि सामाजिक संञ्जालहरु भरिएका छन् । मनमा उकुस मुकुस र कपट नभैकन नेतामा दर्ज भै सकेको प्राणिको मुखबाट एस्तो शब्द कदापि निस्कदैन । के कुनै पनि अपराधीले यमिले जस्तै बेहोसीमा अपराध गरेछु मलाइ आम माफी दिनुस भन्दा पाउछ ? कुनै एउटा बलत्कारी ले नारीको इज्जत लुट्छ अनि मेरो होस गुमेको थियो भनेर माफि पाउँछ ? हो यतिबेला यलिको अभिब्यतिले आगो बलेको छ प्रत्यक नेपालीको मनमा ।
सारा तीन करोड नेपाली को बलात्कार गरेकी छिन यमिले के माफी माग्दैमा हाम्रो इज्जत फिर्ता आउँछ ? अब के कारवाही हुन्छ सरकार ? यसरी हरेक कुरामा माफि माग्दै जाने हो भने माफि शब्दकै बेइज्जत हुने डर छ । एउटा सच्चा देश प्रेमीले त अर्ध बेहोशीमा झन् देशभक्ति को पो नारा लगाउछँ । दिमागले भन्दा पनि देशको प्रेम गर्ने मुटुले पहिला नै काम गरिसकेको हुन्छ । देश हाक्ने नेताबाट यस्तो क्रियाकलाप देख्दा अब यस देशका सबै जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता नेताहरु को पछि लाग्नु हाम्रो मुर्खता हो ।
अब कुरा गरौं नयाँ शक्ति नेपालकी सदस्य समेत रहेकी नायिका करिश्मा मानन्धरको । उनले एउटा स्टाटसको गर्दै म सिनेमाको कलाकार हुँ, प्रविधि बुझ्छु । हिसिला यमीको जसले डबिङ गरेर हालेर उहाँको चरित्रहत्या गर्न खोजेको हो, तिनलाई थाहा भएनछ, खुला ठाउँमा इको आउँदैन । फेरि डबिङ गरेर अझै झुटो थपेर हाल्नुहोस् ।’ भनिन छि कति घिनलाग्दो कुरा गरेको बरु बोल्नेले कुरा फुत्कियो भनेर माफि माग्यो । एक कलाकार भएर यस्तो लजास्पद कुरा गर्नु मुर्खइता बाहेक केही नहोला काग बढी बाठो भने दिशा खान्छ रे करिश्मा ज्यु तपार्इ नखानु ।